Somali daily News – Dagaalkii Westgate oo si rasmi ah u soo gabagaboobey iyo alshabaab oo ka hadlay Home
Dagaalkii Westgate oo si rasmi ah u soo gabagaboobey iyo alshabaab oo ka hadlay
shingani September 25, 2013
(xamarweyne.com):-Warar laga helayo dhanka alshabaab ayaa lagu qiray inuu soo dhamaaday dagaalkii ka socday gudaha suuqa ganacsiga Naroobi ee Westgate halkaasoo dagaalyahano ka tirsan ururkaasi ay qabsadeen sabtidii.
Warka oo la soo dhigay baraha internet ee alshabaabku leeyihiin ayaa si cad loogu sheegay in maanta oo arbaco ah uu soo dhamaaday dagaalkiiay ka wadeen Westgate iyagoo dhanka kalana ka hadlay khasaaraha nafeed ee ay gaysteen.
Xoogaga alshabaab waxay qireen in dhamaan dagaalyahanadoodii ku jirey dhismaha Westgate ay dhinteen saacidihii ugu danbeeyay markii ay gaareen sida ay sheegeen hadafkii ay lahaayeen.
“hadafkii aan ka laheyn waaan gaarnay waxaan dilnay 137 ruux”ayaa lagu yiri warkaasi inkastoo afhayeenada alshabaab aysan si rasmi ah uga hadlin arintaani.
Shalay galinkii danbe ayay ahayd markii Madaxweynaha Kenya uu sheegay inay soo afjareen dagaalka ayna guuleysteen ciidamaoodu sida uu warka u dhigay inkastoo uu qirey in Kenya uu khasaare xooggan ka soo gaaray weerarkaasi.